सार्वजनिक भयो दशैँको टीकाको उत्तम साइत, कति वजे छ ? हेर्नुहोस् – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > सार्वजनिक भयो दशैँको टीकाको उत्तम साइत, कति वजे छ ? हेर्नुहोस्
admin October 1, 2020 October 1, 2020 जीवनशैली, धर्म सँस्कृति	0
नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले विसं २०७७ को विजयादशमीलगायत दशैँका विभिन्न साइत सार्वजनिक गरेको छ । विसं २०७७ कात्तिक १ गते शनिबारदेखि नेपालीको महान् चाड बडादशैँ शुरु हुँदैछ । दशैँको पहिलो दिन वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले घरघरमा दियो, कलश र गणेश स्थापना गरि घटस्थापना गर्छन् । घटस्थापनाको साइत कात्तिक १ गते शनिबार बिहान ११ः४६ बजे शुभ रहेको समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।